Samsung ၏ Galaxy S10 စီးရီးသည် 25W မြန်သောအားသွင်းချက်ဖြစ်သည် Androidsis
El Galaxy S10 + 5G ၏တစ်ခုတည်းသောဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် အသစ် Galaxy S10 စီးရီး ထက်များအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူကြော်ငြာထက် 25W အစာရှောင်ခြင်းတာဝန်ခံ။ ဒီအင်္ဂါရပ်ကိုမကြာသေးမီကကြေညာခဲ့သည် က galaxy A70.
ဒီကနေ့မှာ Samsung ရဲ့ Greater China သမ္မတ Quan Guixian ကဒီအချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ် Galaxy S10e, S10 နှင့် S10 + (standard edition) သည်လျှင်မြန်သောအားသွင်းစနစ်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည် ဆော့ဖ်ဝဲ update ကိုမှတဆင့်။
သတင်းအချက်အလက်များကိုတရုတ်နိုင်ငံရှိ Samsung စတိုးတစ်ခုမှပရိသတ်များနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Guixian ကပြောသည် OTA update ကိုနောက်လတွင်ရောက်သင့်သည် အသုံးပြုသူများအားလုံးသည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့် 25W charger ကိုဝယ်ယူရန်လိုသည် ဒါဟာပြသလျက်ရှိသည်.
အဆိုပါကုမ္ပဏီအမှုဆောင်အရာရှိလည်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် Update S မှတဆင့် Galaxy S10 စီးရီးများသည်ကြာရှည်စွာထိတွေ့နိုင်သောကင်မရာကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်, သို့သော် 25W အမြန်အားသွင်းသည့်နည်းပညာကိုသော့ဖွင့်သည့်တူညီသော update နှင့်အတူလာမည်လားသေချာသည်။ ဖုန်းများသို့လာသည့်အခြားအင်္ဂါရပ်များမှာဘတ်စ်ကားကဒ်များနှင့် NFC လက်ကိုင်ကဒ်များကိုဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် Galaxy S10e, S10 နှင့် S10 + အကြားဘက်ထရီသက်တမ်းကွာခြားမှုဖြစ်သည်
မကြာသေးမီကတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်သတင်းများကိုsharedပြီလပထမပတ်တွင်တောင်ကိုရီးယား၌စတင်မိတ်ဆက်မည်ဟုကြိုတင်မှာကြားထားသည့်ပရိုဂရမ်မရှိပဲကြေငြာခဲ့သည်။ Yonhap သတင်းအေဂျင်စီအဆိုအရ ကုမ္ပဏီ၏ 5G ဖုန်းကိုAprilပြီလ ၅ ရက်တွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည် တိုင်းပြည်အတွင်းရှိအဓိကကွန်ရက်အော်ပရေတာသုံးခုမှတဆင့်။ Samsung Galaxy S10 5G သည်ဝမ် ၁.၅ သန်းဝန်းကျင် (ဒေါ်လာ ၁,၃၃၀ သို့မဟုတ်ယူရို ၁,၂၀၀) ကုန်ကျမည်ဟုစက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းရပ်ကွက်များကဆိုသည်။ ဖုန်းကိုကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ network operator များမှတဆင့်လည်းမကြာမီရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » တရားဝင်: Samsung ၏ Galaxy S10 စီးရီးသည် 25W မြန်သောအားသွင်းစနစ်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်
Android အတွက် Google+ အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများ